Izigidi ubufakazi esabekayo neminyaka emzini ovinjezelwe kanye izimpi abanolaka ukuze kukhululwe Leningrad, manje amelwe eziningi yesikhumbuzo amasayithi. Kodwa endaweni ekhethekile phakathi nemibukiso ekhumbulekayo bekulokhu ekumeleleni Leningrad Museum. Akhiwe engxenyeni zomlando Petersburg, ku Solyanoi umhubhe, sonke isikhathi, wathatha izinkulungwane zezivakashi.
Guides ukuqhuba iqembu amahholo, etshela ngazo zonke izigaba ukuzivikela nokukhululwa kweLeningrad, mayelana isibindi zabantu waso ngokulandela okushiwo indlala nokufa.
Salt Idolobha - Educational Center kweLeningrad
Ikota Salt Idolobha ngasekupheleni XIX leminyaka wayaziwa zonke Petersburger njengoba isikhungo kwezamasiko kanye nezemfundo. Lapha, izakhiwo iminyuziyamu eziningana, sasesiqhutshelwa embukisweni impumelelo ubuchwepheshe kanye ukukhiqizwa. Ngekhulu XX e eziyinkimbinkimbi embukisweni, okuyinto namuhla iwuMnyuziyamu Museum wezokuVikela kweLeningrad, siye eziqhutshwa umeluleki wezolimo, wezandla, yezobuchwepheshe, ezempi kanye iminyuziyamu zemfundo kanye Russian Technical Society. Ngakho-ke, umbuzo mayelana indawo embukisweni wokuqala elalinikezelwe ukuzivikela kweLeningrad, ngisho kuxoxwa.
Lo mbukiso kuqala neminyaka yempi
Ngo-December 1943, lapho wasala ngenyanga ngaphambi ephakamisa ephelele nokuvinjelwa, ubuholi Leningrad Front, kwanqunywa phezu ukulungiselela kanye nokuvulwa kwami embukisweni othi "Ummeli nobuqhawe Leningrad". Indawo selitholakele laziwe kubo bonke Salt Town. I samaholide ukuvulwa emcimbini embukisweni senzeka ekupheleni kuka-April 1944.
Ubukhulu embukisweni babezihluphekela elikhulu ukuze abagqugquzeli kwadingeka ukusebenzisa izakhiwo izakhiwo ezintathu oxhumene, esisogwini yashayisa unqenqema we Fontanka Street. Gangut futhi alley hydrochloric.
Umsebenzi wabaculi abaklami ngesikhathi sempi siye saba abaphuma ngokucacile nangokunembile ezibonisa zonke izigaba Ukuvikelwa nokukhululwa kweLeningrad, zaziphawuleka ngokungabi imiklomelo uhulumeni. Exposure impumelelo kwaba umane emangalisa. izinyanga zokuqala 6 embukisweni kuphela wabonwa abantu abangaphezu kuka-200 eziyinkulungwane: abafundi, abasebenzi embonini, amasosha nanoma ubani abuya basishiye.
Umuzi itholé Museum entsha
Ngosuku ekugubheni usuku lokukhumbula bephakamisa nokuvinjelwa yesibili, ngo-January 1946, lo mbukiso uye wathola isimo esemthethweni futhi igama ukuzivikela kweLeningrad Museum. Ama ifotho, ekumeni of ojenene, izikhali kanye nenyumfomu yamasosha, izinto zokuphila ezempi kanye ubufakazi abesabekayo ukuphila amaNazi idolobha elambile nemisebenzi ukuketula Idokhumentari, onokwethenjelwa futhi terrifyingly kweqiniso. Amagumbi zazihlukaniswe ngale ndaba: impi ku imingcele, indaba "Road of Life", ukufohla edume of nokuvinjelwa, lomtshikatshika ongenabugovu abasebenzi embonini, amazinga ukudla izakhamuzi. Abaningi ziphephile ngesikhathi sempi bayiswa Museum kweLeningrad abahlali, kodwa ukuchayeka is ahlanganiswe e nenkathi yokuthula. Ngemva kwempi, abahlanganyeli abasindile izimpi for Leningrad kwesokunxele irekhodi encwadini izivakashi umnyuziyamu, lapho bashiya amazwi ukwazisa nokwethenjelwa imemori lwalezo zinsuku ezibuhlungu.
History of the Museum ngemva kwempi
Defense kweLeningrad Museum Iminyaka yangemva kwempi usebhekene eziningana kabusha setfulo, futhi ngo-1953, ngesikhathi kubukezwa amaqiniso ekujezisweni eziningi bezempi nabezombusazwe enye ukuphangwa ngokumelene abaholi bezigaba ezingafani, umnyuziyamu savalwa futhi izimpahla zayo sidluliselwe State Museum yezindaba zemihla Leningrad.
Museum of ekuvuselelweni isinyathelo ingeyamakhosi ukuvinjelwa nempi Veterans, abasinde ngesihluku ukuvinjelwa isikhathi khumbula ekumeleleni Leningrad Museum. Umqondo yayisetshenziswa kabanzi kusekelwa abezindaba, futhi ngo-September 1989 umlando inkumbulo kweLeningrad got impilo entsha. Manje, phambi Museum kwakuyinkinga entsha - ukubuya endaweni nemibukiso. Ngo-1995, kwathiwa kabusha wavula setfulo unomphela, kabusha babuthane isitifiketi lempi eliyingqayizivele futhi wathola isimo nokuvinjelwa Leningrad Museum.
Kodwa namuhla endaweni Museum lungaphezu wawungaphansi amahholo embukisweni we Iminyaka yangemva kwempi. Of 40,000 sq. m. Manje Lo mbukiso ebuyiselwa kancane ezingaphezu kwenkulungwane. Umsebenzi ku ukubuyiselwa imibukiso yomlando documentary iqhutshwa njalo, futhi eziningi ziphephile, kanye "baphinde" kwezinye iminyuziyamu, wabuyela Petersburg. Nokuvinjelwa Leningrad Museum namanje elinde ikhambi lenkinga sokwanda isikhala embukisweni.
Ukuze silondoloze imemori zomlando
Le nqubekela phambili zezizukulwane kwimemori edluliselwe ngosizi edolobheni phakathi nempi, manje kuncike izinsalela ngeso. Abantu abasha, owazalelwa ngezikhathi zokuthula, hhayi njengoba ayebone izinto ezinyantisa umzimba izimpi olunegazi futhi belamba le isabelo ovinjezelwe akumelwe nje bagcine ngokufuna ukwazi izifundo komlando, kodwa futhi ukuze ubone ubufakazi obubhalwe ka sempi. Eminyakeni yamuva, sithulula nezikhumbuzo entsha futhi olusha ekhona kakade, lo mbukiso esasibonisa isihloko Ukuvikelwa kanye ukukhululwa kwe-dolobha edume. Imyuziyemu-diorama "Breakthrough we Siege kweLeningrad", lavulwa ngo-1990 emzini Kirov, aphule isayithi ukuvinjelwa, ingxenye yesikhumbuzo omkhulu elalinikezelwe abavikeli kweLeningrad.
Huge Umdwebo-panoramic kubonisa omunye iziqephu enkulu yokukhululwa edolobheni - ukuthatha Shlisselbourg lip kanye nokuphoqa iNeva. Art ukulwa namaqiniso iyamangalisa!
Iminyaka nakanjani abe nyamanambana usuku ngokuwina ngoMeyi, kanye nezingqalabutho ezimbalwa abe imigqa. "Immortal ibutho" aphile, futhi phambi isizukulwane yethu umsebenzi elingenakuphikwa - ukudlula inkumbulo iminyaka evuthayo lezingane zabo nabazukulu.